Qubanaha » Madaxweyne Farmaajo :oo amar ku soo saray in aan wax lacag ah laga bixin karin bangiga .
Madaxweyne Farmaajo :oo amar ku soo saray in aan wax lacag ah laga bixin karin bangiga .
Madaxweynaha Jamhuriyada Somalia mudane Maxamed Cabdilahi Farmaajo ayaa 24 saac ee la so dhafay qabtay shaqo aad u badan oo aysan horay u qaban jirin Masuliyiinti ka horaysay.
Madaxweynaha Farmaajo ayaa shaqoyinkii uu qabtay Saacadihii la soo dhafay waxa ka mid ahaa
1.Waxa u si dag dag ah iskugu yeeray Wasiirka Maaliyada. Gudomiyaha Banka dhexe iyo hanti dhowrka qaranka waxana u ku amray in aysan wax lacag ah bixi karin amar Madaxweynaha la.antiisa asago sido kale faray in ay uso gudbiyaan dhaq dhaqaaqo ugu danbeyay ee Bank dhexe.
2 Waaxa uu la shiiray lamaha amanka waxana uu kala hadlay xojinta amniga iyo ilaalinta kaydka hubka dowlada Masuliyintaas u la kulmay waxa ka mid ahaa taliyeyaasha Ciidamada, Wasiirka amniga iyo gaashandhiga sido kale waxa u kala hadlay qorshe Ciidamada Milatariga loga saarayo Gudaha Magaalada Muqdidho.
3 Waxa u Magacabay 4 Wasiir iyo RW kuxigeen kuwas oo ka shaqayn doona kala wareejinta xilka Madaxweynaha iyo arimo dhowr ah oo ay ka mid tahay qaban qaabinta Xaflada Calemo saarka ayado Wasiiradaasi u ka mid yahay Wasiir Cabdiraxman Ceynte.
4 Waxa uu Qabilay Xubnaha Beesha Calamka u fadhiya Somalia kuwaas oo uu kala Hadlay Taakulaynta Abaraha iyo Arimo kale
5 Waxa uu Casho sharaf u Sameeyay Musharaxiinti Xilka kula tartantay waxayna ka wada hadleen sidii wadanka lo wada samata bixin lahaa.
6 Waxa uu habeen hore saqdii dhexe la hadlay Bulshaweynta Somaliyeed waxana uu kala hadlay gurmadka Abaraha, Joojinta Dabaaldag yada Madama u Compainki Dhamaday iyo Wada shaqayn dhexmarta Dowlada iyo Shacabka.
Ugu danbeyn Madaxweyne Farmaajo waxa u Magacabay Cheaf of Staff kisa iyo Madaxa Paraticolka Madaxtooyada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dardar culus ku bilaabay shaqadi lo igmaday xili usan wali saldhigin Xafiiskiisa Villa Somalia.
Dr Abdiraxman Muuse oo ka mid ah Aqonyahanada Somaliyeed oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shaqada Farmaajo u ku qabtay mudada 24 Sac ah in Madaxdi ka horaysay ay ku qaban jireen 6 maalmood.
Isku soo wada duubo waxaa si xowli ah ku socda shaqada Xafiiska Madaxweynaha Cusub ee Somalia Mudane Farmaajo waxana maalmaha soo socda la dareemi doona isbadal Muuqda.